Southwind Wredger Little River oo leh Ellicott Dredger
Qaybaha kala ah DNREC ee Maareynta Biyaha iyo Kalluunka & Duurjoogta ayaa ku dhawaaqay qorsheyaal mashruuc iskaashi qodis ah oo laga samaynayo wabiga yar ee ku dhow Dover, laga bilaabo buundada Route 9 / Bayside Drive ee Little Creek bari illaa iyo Delaware Bay.
Dredging ayaa loo qorsheeyay inuu bilaabmo todobaadka labaad ee bishaan. Southwind Construction ee Evansville, Ind., Ayaa lasiiyay qandaraaska mashruucan waxayna adeegsan doonaan 14 their Ellicott® Nooca 970 dredge.
Kanaalku wuxuu qiyaastii dhererkiisu yahay cagaha 12,400 dhererkiisana waxaa loo qulquli doonaa ballacyo ah cagaha 40 lugta webiga iyo cagaha 60 ee qaybta Delaware Bay, iyo illaa qoto dheer oo ah cagaha 5 dhexdhexaad hooseeya. Wabiga yar ayaa ugu dambeeyay gobalkii gobolka ka dib 1981-1982.
Faa'iidada labaad ee mashruuca ayaa ah isticmaalka faa'iidada leh ee walxaha qallalan si loo soo celiyo loona xoojiyo deegaanka shimbiraha ee u dhow Qaybta Kalluunka & Duurjoogta Little Creek Duurjoogta Aagga ee xerada Qaxootiga, oo ah mid ka mid ah unugyo dhowr ah oo ka kooban soo-jeedinta loo qaybiyay dikiyada si loogu oggolaado maamul gooni .
Waxyaabaha isticmaalka faa iidada leh waxay kor ugu qaadi doonaan sare u qaadida sicirka ee unugyada jiiditaanka ilaa heer kor u qaada biyo-dhaaminta iyo deegaannada kala duwan iyo ilaha cuntada, waxay bilowdaa sare u qaadida heerka sare ee biyo-mareenka taas oo dhalisay biyo xaddidan oo biyo-furan.
Mashruuca $ 1.01 milyan ee ay dowladdu maalgaliso waxaa ka mid ah ka-jajabinta 79,000-dhudhun laba jibbaaran oo shey ah kanaalka, iyo ka-qaadista barkinta 30 sariir iyo markab dib-u-dhac ah oo laga helo marinka u dhow Little Creek.
Dhuun ayaa la dhigi doonaa wado hore u jirta aagga Duurjoogta ee Little Creek si ay uga soo daadato sheyga qashinka ka soo qulqulaya webiga oo galaya unugyada impoundment ee qaxootiga.
Mashruucu lama filayo inuu faragelin ku sameeyo ugaadhsiga aagga. Dhameystirka mashruuca ayaa la rajeynayaa Oktoobar 1, kahor xilli roobaadka biyuhu ugu sarreeya.